Synergy စျေး - အွန်လိုင်း SNRG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Synergy (SNRG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Synergy (SNRG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Synergy ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
SNRG – Synergy
Market ကဦးထုပ်: $122 318.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Synergy တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Synergy များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SynergySNRG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.449SynergySNRG သို့ ယူရိုEUR€0.38SynergySNRG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.342SynergySNRG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.408SynergySNRG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr4SynergySNRG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.83SynergySNRG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč9.91SynergySNRG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.67SynergySNRG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.594SynergySNRG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.627SynergySNRG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$9.92SynergySNRG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.48SynergySNRG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.41SynergySNRG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹33.61SynergySNRG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.75.75SynergySNRG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.615SynergySNRG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.686SynergySNRG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿13.96SynergySNRG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥3.12SynergySNRG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥47.81SynergySNRG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩532.36SynergySNRG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦173.28SynergySNRG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽32.84SynergySNRG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴12.26
SynergySNRG သို့ BitcoinBTC0.00004 SynergySNRG သို့ EthereumETH0.00117 SynergySNRG သို့ LitecoinLTC0.00825 SynergySNRG သို့ DigitalCashDASH0.00494 SynergySNRG သို့ MoneroXMR0.00504 SynergySNRG သို့ NxtNXT35 SynergySNRG သို့ Ethereum ClassicETC0.0661 SynergySNRG သို့ DogecoinDOGE129.48 SynergySNRG သို့ ZCashZEC0.00545 SynergySNRG သို့ BitsharesBTS13.82 SynergySNRG သို့ DigiByteDGB14.36 SynergySNRG သို့ RippleXRP1.59 SynergySNRG သို့ BitcoinDarkBTCD0.0155 SynergySNRG သို့ PeerCoinPPC1.49 SynergySNRG သို့ CraigsCoinCRAIG204.45 SynergySNRG သို့ BitstakeXBS19.13 SynergySNRG သို့ PayCoinXPY7.83 SynergySNRG သို့ ProsperCoinPRC56.3 SynergySNRG သို့ YbCoinYBC0.000241 SynergySNRG သို့ DarkKushDANK144 SynergySNRG သို့ GiveCoinGIVE971.84 SynergySNRG သို့ KoboCoinKOBO102.23 SynergySNRG သို့ DarkTokenDT0.413 SynergySNRG သို့ CETUS CoinCETI1295.98
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 13:50:02 +0000.